Lelee Asọmpi a: merie iMac site na DevDad! | Martech Zone
Lelee asọmpi a: merie iMac site na DevDad!
Fraịde, Ọktọba 19, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
N'oge na-adịbeghị anya, m na-a payingakwu ntakịrị anya na ọtụtụ asọmpi na otu ha si dị mma, ọkachasị ebe ọ bụ na ego nke $ 1,000 m fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe a (naanị ndị chọrọ nkwado ole na ole!)
Tonight m mere gafee Nọrọ n'ụlọ nna iMac Nye-pụọ. Asọmpi a emeela nke ọma. Ọ nwere ihe dị oke egwu, nnukwu foto, yana ndepụta zuru ezu nke ihe achọrọ iji sonyere asọmpi - nke ọ bụla na-akwalite blog na onye nkwado. Mike tinyere nnukwu ngwugwu - ohuru ohuru 20 ″ Apple iMac. O nwere ihe nhazi 2.0 GHz Intel Core 2 Duo, 1 GB nke ebe nchekwa, ihe ike 250 GB, 8x SuperDrive, na ihe ngosi ngosi 20 ′. Ọ na-abịa na òké na keyboard, ma na-ere ahịa maka $ 1199.
Ọ dị mma na m ga-ede post na ya na banye zoo!
Obere ihe banyere Mike na mbu - onye na-ede blogger n’azụ Chidinma, n'okwu nke aka ya:
Aha m bụ Mike. Abụ m olu n'azụ DevDad.com. Abụ m onye mmebe weebụ afọ 21 na ọkachamara SEO site na Tampa Bay, Florida. Enwere m mmasị ịde blọgụ, na nso nso a ghọtara na ihe niile m na-ede banyere ya bụ ọrụ, ebe m chọrọ ide banyere ya ihe na-eme n'ụlọ n'ụbọchị. Ana m etinye ntanetị a dịka ụzọ iji dee akwụkwọ ndụ m dị ka nna ịnọ n'ụlọ, dị ka onye nwe ụlọ ahịa ọhụụ, yana nwa okorobịa na-anwa ịchọta etu ọ ga-esi jujuo anya ka ọ dị na mbụ. Enwere m olileanya na ị ga-arapara iji hụ ka ihe si aga n'ihu!
Mike nwere okirikiri nhọrọ ukwuu na ya na saịtị, M hụrụ n'anya na agba, ndịna, na karịsịa foto nke ya mara mma nwa. Jide n'aka lee anya! Mike ka malitere BlogHelper.org! Enwere ụfọdụ ọgụgụ dị ukwuu na saịtị a ma ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgụ maka ịde blọgụ!
Banyere SitterCity, ebumnuche ha bụ ijikọ ndị nne na nna na ndị na-elekọta ha na mpaghara ha. Ebe ahụ nwere akụkụ abụọ na ya ks folks na-achọ onye na-anọdụ ala na ndị ahụ na-anọdụ ala nwere ike ịchọ ọrụ! Ọ bụrụ na ị na-eche banyere nchekwa, saịtị ahụ nwere ike itinye nlele ndabere site na iji LexisNexis maka $ 9.99 dị ọnụ ala.
Yabụ n'ebe ahụ ị nwere ya, 3 nnukwu saịtị na otu post!
Tags: Joe Pulizziogwe oziibe edokọbaraogwe ngwaọrụn'elu mmanyawordpress plugin
Dị Ndụ, Lovehụnanya, Ọchị
Ọkt 20, 2007 na 12:26 PM
Ejiri m otu n'ime ndị a na ụlọ ahịa taa. Enweela m PC mgbe niile, yabụ na amaghị m 'mac ụwa'. Agbanyeghị na mgbe m nyesịrị iMac nnwale ule, ejiri m n’aka na ọ ga-eweta nnukwu ihe nrite. Nke a ọ dị ka nke ị setịpụrụ Katie?
Ọkt 20, 2007 na 12:46 PM
Katie nwere eMac, onye CRT bu ụzọ nke iMac. Ọ bụrụ na m merie, ọ ga-aga n'ime ụlọ ya!
Ọkt 20, 2007 na 1:36 PM
Ọ dị mma nke ọma. Ihe ahụ dị mma.
Aug 24, 2008 na 2: 47 AM
Ọ ga-amasị m ịnweta mac maka kọleji. Achọrọ m imac a maka m na-amalite mahadum na mgbụsị akwụkwọ.
Mee 24, 2009 na 4: 53 PM
Achọrọ m iMac. Ana m amalite Designlọ Akwụkwọ Nhazi vidiyo n'ihe dị ka otu ọnwa na nke ọma. iMacs nwere mpụga video edezi